Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Columbia China dia manokatra hopitaly vaovao vaovao sy lehibe indrindra ao Jiaxing
Columbia China, fiaraha-miasa eo amin'ny Seattle's Columbia Pacific Management, Sheares Healthcare Group, sampana 100% an'ny orinasa fampiasam-bola Singapore Temasek, ary Swire Pacific Limited ao Hong Kong, dia manokatra ny hopitaly fahatelo sy lehibe indrindra amin'ny fandriana 500-speciality any Jiaxing, Faritanin'i Zhejiang.
Ny hopitaly Jiaxing Kaiyi dia nahazo alalana amin'ny fandriana 500 miaraka amin'ny velaran'ny fanorenana 112,000 metatra toradroa. Izy io dia naorina mifanaraka amin'ny fenitry ny Joint Commission International (JCI) ary mikendry ny hanome fitsaboana ifotony amin'ny marary amin'ny alàlan'ny teknolojia ara-pitsaboana manara-penitra. Manana efitrano fandidiana 10 ao anatin'izany ny OT nomerika 2, DSA 2, efitrano 6 LDRP (Labor, Delivery, Recovery ary Postpartum), ary fitaovana fitiliana avo lenta toy ny MRI 3.0. Mitentina 220 tapitrisa dolara ny totalin'ny fampiasam-bola ary naharitra 3 taona ny fanamboarana sy fanamboarana ny hopitaly.
Ny tolotra omena ao amin'ny Hopitaly Jiaxing Kaiyi dia misy ny fifampidinihana amin'ny marary any ivelany, ny fitsaboana amin'ny hopitaly, ny lozam-pifamoivoizana & vonjy taitra ary ny fitiliana ara-pahasalamana. Anisan'ny mampiavaka azy ny fitsaboana anatiny, ny oncologie, ny fandidiana ankapobeny, ny orthopedique, ny taovam-pisefoana, ny urolojia, ny endocrinology, ny gastroenterology, ny neurolojia, ny nephrology, ny kardiôlôjia, ny dermatôlôjia, ny aretim-behivavy, ny fandrindram-pianakaviana, ny hemodialyse, ny pediatrics, ny fanarenana ary ny fitsaboana sinoa nentim-paharazana. Izy io dia manana fitaovana fitiliana ara-pitsaboana mandroso toa ny GE's MRI 3.0, GE's CT 64, radiolojia nomerika, ultrasound, ary laboratoara fitsaboana feno. Ny marary dia afaka mampiasa ny fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny daholobe sy ara-barotra any amin'ny hopitaly.
"Amin'ny fanokafana ny hopitaly fahatelo sy lehibe indrindra, Columbia China dia mikendry ny hanome ny haavon'ny kalitaon'ny fahasalamana, ny serivisy ary ny traikefan'ny marary ho an'ny mponina 5.5m ao Jiaxing," hoy i Bee Lan Tan, Filoha & Tale Jeneralin'ny Columbia China. "Ny fanokafana mahomby ny hopitaly nandritra ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra dia tsy ho tanteraka raha tsy nisy ny fanoloran-tena sy ny fahombiazan'ny governemanta Jiaxing ary ny fanohanan'ny manampahefana ao amin'ny faritra ara-toekarena sy ara-teknolojia Jiaxing. Columbia China dia mbola manokan-tena hitondra talenta ara-pitsaboana sy fitantanana bebe kokoa ho an'i Jiaxing, mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mponina eo an-toerana. "
Amin'ny maha-iray amin'ireo tetikasa manan-danja amin'ny "Tetikasa 100 Taona 100" an'i Jiaxing, ny fanokafana ofisialy ny Hopitaly Kaiyi dia hitondra fanatsarana ny tontolon'ny tolotra ara-pahasalamana ao Jiaxing ary ahafahan'ny olona ao Jiaxing sy ny manodidina azy hiaina tolotra ara-pahasalamana mahomby sy manara-penitra iraisam-pirenena tsy misy. voatery nandao an'i Jiaxing.
Tamin'ny lanonana fanokafana, nanao sonia Memorandum of Understanding ny Hopitaly Jiaxing Kaiyi sy ny Zhejiang Tongji College mba hiara-hiasa amin'ny fanofanana ny mpiasa, ny fikarohana siantifika ary ny fanavaozana, ary hananganana sehatra iray hampidirana ny fianarana, ny fampiharana ary ny fikarohana.
Jiaxing Kaiyi Hospital sy Jiaxing Taiwan Investing Entrepreneurs Association dia nanao sonia fifanarahana ihany koa mba hamoronana tontolo ara-pitsaboana mora idirana, milamina ary mahazo aina ho an'ny Taiwaney monina sy miasa ao Jiaxing.
Ao anatin'ny andraikitry ny orinasan'ny Hopitaly Jiaxing Kaiyi, nanome 100,000 RMB ho an'ny Zhejiang Foundation ho an'ny Sembana izy mba hanohanana ny fandaharan'asa fiantohana ara-pahasalamana lehibe ho an'ny olona manana fahasembanana. Izany dia hanampy amin'ny fampihenana ny vesatra ara-pahasalamana ho an'ireo marary manana aretina lehibe sy ny fianakaviany.
Cao Haoqiang, Filohan'ny Hopitaly Jiaxing Kaiyi, dia nilaza fa “nisarika ny sain'ny besinimaro ny hopitaly Jiaxing Kaiyi hatramin'ny nisokafany moramora tamin'ny 20 Mey 2021. Nandritra ny fanokafana malefaka, ny rafitra, ny fotodrafitrasa, ny serivisy ary ny fizotran'ny hopitaly dia nosedraina tamim-pahombiazana ary ny mpiasan’ny mpitsabo ao amin’ny sampana tsirairay dia nofanina mba hanome ny tolotra tsara indrindra ho an’ireo marary.”
Tamin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra azo avy amin'ny fanokafana malefaka, dia nanangana ny "Ivotoerana Mpitsabo malaza" izahay, mikendry ny hitondra ireo dokotera tsara indrindra any Shina mba hanome fikarakarana tsara indrindra ho an'ny mponina ao Jiaxing.
Miaraka amin'ny fandefasana ofisialy, ny hopitaly Jiaxing Kaiyi dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fananganana ny "Ivotoerana Jiaxing Kaiyi Dokotera Orthopedic malaza any Shanghai", miaraka amin'ny hopitaly ambaratonga ambony malaza sy hopitaly orthopedique ao Shanghai. Ny Hopitaly Jiaxing Kaiyi dia mikendry ny hanome toro-hevitra manam-pahaizana avy amin'ireo dokotera Shanghai eo amin'ny “tokonam-baravaran'i Jiaxing”.
Mba hamerenana ny fiaraha-monina, nanomboka ny 21-23 Oktobra, ny hopitaly Jiaxing Kaiyi dia nanao tobim-pahasalamana “Andron'ny Fikarakarana Vehivavy – Fitsaboana ny Nono Intelligent AI ho an'ny Kansera”, mandray andraikitra ara-tsosialy amin'ny fahasalaman'ny vehivavy. Ny AIBUS, robot marani-tsaina manara-maso ny nono, miaraka amin'ny ekipan'ny mpitsabo anay dia hanao ny fitiliana sy hanatanteraka hetsika fanabeazana ara-pahasalamana amin'ireto vondrom-piarahamonina manaraka ireto - Jiaxing Yu Xin Community, Cao Zhuang Community, Haiyan Bolite Paper ary Huixin Import & Export Group. Ny hopitaly Jiaxing Kaiyi dia hanao fitiliana maimaim-poana amin'ny homamiadana ihany koa.